Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina izityalo kunye nokuncitshiswa kwenani labantu nge-eugenics: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Novemba 2019	• 8 Comments
Ukuba umntu ngequbuliso ufumana uqwalaselo olukhulu kwaye uyinkwenkwezi ekhulayo kwinqanaba lehlabathi, oko akuqhelekanga ukuba kwenzeke. Kwimeko yesimo sezulu saseSweden kunye nesishoshovu sendalo esingqongileyo u-Greta Thunberg kubonakala ngathi ucwangciso olufanelekileyo lwaluyenzile ngaphambili olu. Umama wakhe, uMalena Ernman, uphumelele owokugqibela ngokuthatha inxaxheba kweSweden kwi-Eurovision Song Contest kwi-2009 kwaye ke waba bubuso obuqhelekileyo, obuluncedo xa intombi yakho ibukeka njengawe kwaye kamva ibe yinkwenkwezi yehlabathi. Ukunyuswa okufihlakeleyo kusenokwenzeka ukuba sele kuqalile apho. Ungawuphendula umbuzo wokuba ngaba umama uMalena angacula kakuhle na (jonga apha). Nangona kunjalo, kunomdla ngakumbi ukufunda usapho lwaseThunberg kwaye uya kufumanisa ukuba izifundo ze-CO2, 'ukufudumala komhlaba' kunye 'nokucutha kwenani labantu' zivela kusapho olunye.
U-Greta Thunberg (ozalwe kwi-2003) ngokweWikipedia umzala wesibini okude kaSvante Agasti Arrhenius. Utata wakhe uSvante Thunberg, ongumdlali weqonga, ubizwa ngegama likaSantie Arrhenius. I-Arrhenius ibonwa njengososayensi wokuqala ukuchaza into ebizwa ngokuba yi-Arrhenius effect, ukuphuculwa kwendalo ngokufudumala komhlaba ngokwandisa ukuphuma kwamanzi kunye ne-carbon dioxide (CO2) elwandle ngenxa yokwehla kokubonisa. Waye waxela kwangaphambili ukuba ukunyuka kwe-CO2 kwimozulu kubangela ukwanda kwamaqondo obushushu eMhlabeni. Ngokutsho kwakhe, ukuphindwa kabini kwe-CO2 kuya kulungelelaniswa nobushushu ukusuka kwi-4 ukuya kwi-6 degrees, okubangelwe kukufudumeza kwelanga kwenxalenye ye-2 / 3e kunye CO1 yenxalenye ye3 / 2e. Oku kutolikwe ngabaphengululi abanjengoKeel njengesixhobo sokugcina ukushisa okubangelwa ngokupheleleyo yi-CO2. Ke ungathi umxholo ulusapho.
USenee Arrhenius wazalelwa eGut Vik, kufutshane ne-Uppsala, unyana kaSantie Gustav noCarolina Thunberg Arrhenius. Kubonakala ngathi i-Greta ayisi umzala okude, kodwa ngumzukulwana ohlukileyo. I-Wikipedia ayitsho ukuba uSvante Arrhenius ngokwakhe utshatile noThunberg. Igama lakhe yayinguKarolina Kristina Thunberg. Oku kubonakala kwiziphumo zokukhangela ezibonakalayo kuGoogle. Nangona kunjalo, ukuba ucofa kwikhonkco ngokwayo, umxholo uyafana myheritage.com ukuhlengahlengiswa ngokunxulumene nesiphumo sophando esibonisayo (jonga umfanekiso ongezantsi). Kubonakala ngathi kukho ukungavisisani nge-pedigrees kwaye kubonakala ngathi igama elithi Thunberg linokunxulumana ngokuthe ngqo nalo msunguli wobushushu behlabathi, Svante Arrhenius. Kuyamangalisa nokuba uSvante mhlawumbi utshatile kusapho (ukusuka kwicala likanina). Isigulo esinjalo yinto eqhelekileyo esiyibonayo ngegazi elidala elihle (ezinje ngaphakathi incwadi yam ebizwa). Nangona kunjalo, ukuba kukho ukungcungcutheka kunye nemithi yosapho, loo nto ithi ngqo isenokungabi nakho ukungqina, kodwa ikhonkco losapho alinakukhutshwa.
USenee Arrhenius wayebandakanyeke kwi-eugenics kwaye wayelilungu lebhodi ye-Sweden Society for Racial Hygiene. Iwebhusayithi eugenicsarchive.ca Ichaza oku kulandelayo malunga noku:
U-Arrhenius wazibandakanyeka kwintshukumo ye-eugenics ngokujoyina i-Sosaiti yase-Sweden yoLuntu lwezococeko, iqela elijolise kuphando kunye nokukhuthaza izibonelelo zokulawulwa ngokutsha okulawulwayo ebantwini (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Olu luntu lwenziwa kwi-1909 kumzamo wokudibanisa ii-eugenics kunye nokukhuthaza utshintsho kumgaqo-nkqubo ukukhuthaza i-eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). U-Arrhenius wayengelilo ilungu kuphela; waye ebhodini eluntwini (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Uluntu lwanika intetho kwaye lwadlulisela iincwadana zolwazi pro-eugenic eluntwini, kodwa ngenxa yokuba kwakungekho semthethweni kubo ukuxoxa ngayo nayiphi na indlela yokulawula ukuzalwa, eli qela lalicingelwa ukuba linempembelelo limited (i-Broberg & Roll-Hansen, 2005).
U-Arrhenius wayebandakanyeka kwintshukumo ye-eugenics ngokuba lilungu leSweden Society for Purity, iqela elijolise kuphando kunye nokukhuthaza izibonelelo zokuzala komntu ezilawulwayo (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Le ntetho yasekwa kwi-1909 kumzamo wokwazisa ii-eugenics kunye nokukhuthaza utshintsho kumgaqo-nkqubo ukukhuthaza ii-eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). U-Arrhenius wayengelilo ilungu kuphela; Wayekwibhodi yomanyano (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Umbutho unike izifundo kwaye usasaze amaphetshana e-pro-eugenic eluntwini, kodwa ngenxa yokuba kwakungekho semthethweni ukuxoxa ngayo nayiphi na indlela yokuthintela inzala, kucingelwa ukuba iqela ngokubanzi linempembelelo elinganiselweyo (i-Broberg & Roll-Hansen, i-2005).
Utatomkhulu ka-Greta (wacingelwa) wayengumntu omkhulu. Ngokujikeleze i-1900, le Sentie Arrhenius yabandakanyeka ekusekweni kweZiko likaNobel kunye neMabhaso kaNobel. Kwi-1901 waye-ngaphandle kwenkcaso ekrakra-wanyula ilungu leRoyal Sweden Academy of Science. Ubomi bakhe bonke uya kuhlala elilungu leKomiti yeNobel yeFiziki kunye nelungu lekomiti ye-Nobel yeKhemistry. Usebenzise isikhundla sakhe esinempembelelo ukucwangcisa amabhaso kaNobel kubahlobo bakhe (uJacobus van 't Hoff, uWilhelm Ostwald noTheodore Richards) kwaye wazama ukubakhumbula ezintshabeni zakhe (uPaul Ehrlich, uWalther Nernst, uDmitri Mendeleev). Uye wafumana ibhaso likaNobel kwi1903 kwaye ke eneneni wazizuzisa ngokwakhe, kuba wayebandakanyeka ekumiselweni liziko elizuze amabhaso. Ke isayensi ke yayimalunga nokukhetha hayi malunga nomxholo.
Kuyathakazelisa ukuba kwiimpapasho ezininzi kuxoxwa ukuba ibali lobushushu behlabathi malunga nokumisela urhulumente wehlabathi kunye nokuncitshiswa kwabemi. Ndabhala malunga noko kwinqaku lam lokugqibela (jonga apha). In eli nqaku Ummeli woluntu u-Brandon Smith uyenza icace gca into yokuba i-manifesto evela kuNobhala Jikelele we-UN evela kwi-90 ibonakalisa ukuba ukufudumala komhlaba kwaqalwa ukwothusa uluntu lwehlabathi kwaye ke lwatyhalela phambili kwi-ajenda. Kwinqaku lakhe ukwabonisa ngokugqibeleleyo ukuba loo nto ye-ajenda nayo yeyokunciphisa inani labemi. Ewe, loo nto ye-ajenda nayo inokutsalwa ngokubuyela ku-Greta (ecingelwayo) utat'omkhulu.
Ke ukuba i-Greta Thunberg ivuthuza phezulu kakhulu ukusuka kwinqaba kangangokuba kufuneka simamele ngakumbi kwisayensi yokufudumala kwehlabathi nge-CO2, ngoku kuyabonakala ukuba ithiyori ibonakala ivela ngqo kuye (kakhulu) kumkhulu-mkhulu wakhe kunye notatomkhulu omkhulu. scammer owazinikelayo yena kunye nabahlobo bakhe Nobel amabhaso. Oko kuxela malunga neendlela ezininzi zenzululwazi namhlanje ezityhalelwa ecaleni xa zigxeka ukufundwa okusemthethweni kokufudumala kwehlabathi ngenxa ye CO2.
Kwincwadi yam entsha uza kufumana isishwankathelo esicacileyo sayo yonke imiqolo yokukhohlisa kunye nenkohliso. Ikwabonisa ukuba le nkqubo intsha yehlabathi iza kululawula njani inqanaba le-DNA kunye naphakathi kwengqondo nekhompyuter. Incwadi ayisiyo ikopi yeencwadi zikaDavid Icke kwaye ayinanto yakwenza nomhlaba omdaka okanye izinto ezihubhayo. Incwadi iyenza, nangona kunjalo, inike isishwankathelo esibalulekileyo sendlela iinkqubo zokucwangcisa zakhiwe ngayo kunye nokuba zinokuqondwa njani. Kuba le ncwadi inokufundwa ngosuku olunye kwaye iza nesisombululo sekhonkrithi, kulula kakhulu ukusasaza kusapho nakwabahlobo. Lixesha lokuba sithathe inyathelo kwaye lilixesha lokukhuthaza incwadi. Uyawuxhasa nomsebenzi wam ngokuthengwa kwencwadi.
Uludwe lwekhonkco lovimba: myheritage.com, alt-market.com, eugenicsarchive.ca
Ngaba u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU kamva) ngokwenene kwigazi elifanayo njengentsapho yasebukhosini yaseBritani?
tags: inzala, wehla, Iziphumo ze-Arrhenius, CO2, eugenics, eziziimbalasane, kuba, Greta, Ucoceko, Nobuhlanga, Society, mvume, Senee Arrhenius, Swedish, Thunberg
18 Novemba 2019 kwi-13: 42
Yiyo yonke into yobukomanisi ngomnyango ongasemva, apho ubunzima okanye into eseleyo ishiya ulawulo / amandla kubambalwa abonwabileyo phantsi kwesikhokelo 'sotshintsho lwemozulu'.
“Ngaba ayikuphela kwethemba leplanethi iphela ethi ukuphucuka kwempucuko? Ayiloxanduva lwethu ukwenza oko? ”- UMaurice Strong, umsunguli weNkqubo yezeNdalo ye-UN
"Ukudalwa kwendalo esingqongileyo" okuvelayo okanye impucuko yethu ... ngokuqinisekileyo iya kuba neziphumo kwezopolitiko. Mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu kuzo zonke ziya kuba lutshintsho ngokuthe ngcembe kwisimo seZizwe eziManyeneyo. Ngokungafikelelekiyo, kufuneka icinge izinto ezithile ngurhulumente wehlabathi. ”- UMikhail Gorbachev, uMongameli weForum yeHlabathi
Emva 'kokuwa' kweSoviet yontlalontle uGorbachev uthweswe izidanga ngokungqongqo kwizikhundla zamandla ngaphezulu koorhulumente abazimeleyo. Ngexesha lolawulo lukaClinton wayehlala e-Presidio eSan Francisco *, ebhabha nje umnqamlezo oluhlaza weKnight of Malta kwindawo awayehlala kuyo. Indima yakhe ne-UN yayikukhuthaza inkolo entsha ye- “Green Green” yenkolo ethandelwe yi-UN ngabantu. Kunye nabalinganiswa abanjengoMaurice Strong kunye no-Al Gore, uGorbachev uyilo "Iphepha lomhlaba" elijolise endaweni yemiyalelo elishumi.
18 Novemba 2019 kwi-14: 46
18 Novemba 2019 kwi-14: 47
UAdam Weisshaupt usapho kunye okanye ziindaba ezobuxoki?
18 Novemba 2019 kwi-14: 50
I-Thunberg yintsapho eyaziwayo ye-freemason. Idlozi likanina yayisithandi-sobulumko sendalo (injineli yentlalo) esivela e-uppsala onamathela kumqambi wokukhanya waseBavaria u-Adam Weisshaupt.
Le yindlela le ngxelo. Ndiza kuyithumela okwethutyana, kodwa ngokuqinisekileyo ayinakuze ilandelwe. Ngayiphi na imeko, igama liyavela kwincwadi enye, kodwa nokuba ngaba yonke loo nto ithi kude kakhulu.
18 Novemba 2019 kwi-15: 00
Ewe Gotha kunye neendawo ezikujikelezileyo yindawo enomdla yosapho oluthile .. Saxe-Coburg naseGotha (umoya), ukuze uyibone indlela imigca esebenza ngayo kwakhona ..
IMalizia II iya kubanjwa nge-yachtsman eyaziwayo uBoris Herrmann kunye noPierre Casiraghi, umzukulwana omkhulu okanye inkosana eyandisiweyo yaseMonaco uPrince Ranier III kunye nomdlali weqonga uGrace Kelly. Isikhephe, naso, sasibizwa ngokuba ngu-Edmond de Rothschild, emva kokuba ngumnxibelelanisi wezezimali kunye nomseki wenqanawa yeembaleki. Ulwakhiwo lwayo luxabisa ngaphezulu okanye nge-X 4 yezigidi.
kakuhle abarhanelwa abaqhelekileyo, awukwazi ukubalekela ...
18 Novemba 2019 kwi-15: 08
Mamela ke ngoku lo mfo waseGotha, indlela imibala emfusa ehambelana kakuhle nembali 😀 Imvula enombala okanye iyarhuma kwakhona 😉
18 Novemba 2019 kwi-15: 25
kwaye ubone ukuba inqaku libonakala njani kwisiza se-trollensite ngaxeshanye, ukubuyisela yonke loo nto kwindawo ehlekisayo kunye nokukhohlisa ukukhangela:
Ngaba uGreta Thunberg ungumhambi wexesha?
NgoMvulo, ngoNovemba 18 2019 15: 04
18 Novemba 2019 kwi-18: 44
Unokuxelela ngenani lamaxesha ukuba inqaku elolu hlobo labelwana ngalo kunye nenani leendwendwe elingekhe lenyuke kakhulu ngaphezulu komndilili, nto leyo ebonisa ukuba iFacebook iyayihluza (ayibonakalisi kumda wexesha labahlobo). Kungenxa yoko iyinto ebiyelweyo kwaye akukho mntu uyayibona. Inkululeko yokuthetha, kodwa emva koko yafakelwa.
« I-UN manifesto '90 ibonisa: imozulu yemozulu eyenzelwe ukuphumeza urhulumente wehlabathi
UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.701.642
Umcebisi wezopolitiko uphakamisa ukwakha iinkampu zokufunda kwakhona!
Ingcinezelo ebakho ebantwaneni inkulu!
Ilanga op Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI
SalmonInClick op Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI
UMartin Vrijland op Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI
Riffian op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-3)